Faah faahin weerarkii lagu qaaday Guriga Wasiir Waran Cade. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / Faah faahin weerarkii lagu qaaday Guriga Wasiir Waran Cade.
Faah faahin weerarkii lagu qaaday Guriga Wasiir Waran Cade.
OgaalFM- Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan nin hubeysan oo xalay weerar ku qaaday Guriga Wasiirka Arimaha Gudaha maamulka Soomaaliland Cali Maxamuud Waran cade oo ku yaala Bartmaha magaalada Hargeysa.
Ninka weerarka ku qaaday Guriga Wasiirka ayaa la sheegay in uu adeesanayay Qori Nuuciisu yahay AK47, islamarkaana Rasaas uu ku ridayay Guriga Wasiirka.
Ilaalada Wasiirka iyo Ninka ayaa waxa ay isweedaarsadeenRasaas fara badan, waxaana ninka soo qaaday weerarka la sheegay in ay Qaraabo dhow yihiin Wasiirka Arimaha Gudaha maamulka Soomaaliland Cali Maxamuud Waran cade.
Ciidanka Bolisska maamulka Soomaaliland iyo ciidanka Sida gaarka ah u tababaran ee RRU-da ayaa waxa ay gaareen Guriga Wasiirka si ay usugaan amaanka, inkastoo ninkii weerarka soo qaaday uu isaga baxsaday goobta.
Ciidamada Boliiska ayaa maanta waxa ay magaalada Hargeysa ka wadaan howlgallo lagu baadi goobayo ninka hubeysan ee weerarka ku qaaday Guriga Wasiirka, inkastoo ilaa iyo hada Wasiir Waran Cade uu san ka hadlin dhacdadan.
Previous: Ban Ki-moon oo booqday qaxooti ku sugan Jaziirad ku taal Gariiga (Sawirro).
Next: DHAGEYSO: Dowladda oo dhiiragalinaysa ganacsiga gaarka ah.